Shirkadaha – Red Sea Energy
39 karoon bishii.
Joogto ah shirkadaha (FASTPRIS)
Qiimo go’an ayaa loogu talagalay adiga oo doonaya saadaalin. Qiimaha go’an ayaa go’an sanad dhan. Haddii aadan rabin layaabka qiimaha, qaabkan heshiiska adiga ayaa laguugu talagalay. Waxaad ka takhalusi doontaa dhammaan walbahaarka iyo fikradaha adoo dooranaya heshiiskan.
Laga bilaabo 2169 karoon bishii.
Majiro ajuuro qarin,